बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन - टि. एल. एन पोस्ट
Home अर्थ बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आइपीओ भर्ने आज भदौ १५ गते मंगलबार अन्तिम दिन हो । आज कार्यालयसम्ममा यसमा आवेदन दिन सकिनेछ । यसअघि भदौ १४ गते सोमबारसम्म समय दिइएकामा यस दिन श्रीकृष्ण जन्मअष्टमीका अवसरमा सार्वजनिक विदा परेकाले एक दिन समय थपिएको हो ।
यसले साउन ३२ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई आइपीओ बिक्री खुला गरिरहेको छ । कम्पनीले नुवाकोट जिल्लाका आयोजना प्रभावितका लागि कुल ४ लाख कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो ।
यसमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले नुवाकोट जिल्लामा रहेको ज्योति विकास बैंकको शाखा, प्रभु बैंकको शाखा र सिभिल बैंकको शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी लगानीकर्ताले सि–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फतबाट पनि सेयर भर्न सक्नेछन् ।
यसमा सिभिल क्यापिटल मार्केटले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले बुद्धभूमिको आइपीओलाई औसत भन्दा कम आधार जनाउने ‘ग्रेड ४ प्लस’ रेटिङ दिएको छ । यसले ४.९९३ मेगावटको लोवर तादी खोला हाइड्रोपावर आयोजना नुवाकोट जिल्लामा निर्माण गरिरहेको छ ।
Previous articleधादिङमा ब्रेक फेल भएर मिनि ट्रक दुर्घटना, ३५ घाइते मध्य गम्भिरलाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौ
Next articleमिर्गौला फेरेर आए झलनाथ खनाल, विमानस्थलवाटै दिए ओलीलाई यस्तो चुनौती
आजको मौसम यस्तो, यी ४ प्रदेशहरुमा पानी पर्ने संभावना
आज यी ठाउँहरुमा ठूलो वर्षाको सम्भावना